निषेधाज्ञामा यात्रु ओसार्छन् गोरखामा एम्बुलेन्स | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:२१
बिहिवार दिउँसो ग १ क ३९४ नम्बरको एम्बुलेन्स गोरखा भित्रने नाका मझुवा चेकपोष्ट नजिकै आईपुग्दा एम्बुलेन्स बेस्सरी हुँईकियो । चेकजाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्समा यात्रु आएको शंका लाग्यो र रोके ।
एम्बुलेन्सको अगाडी चालक सहित दुई यात्रु र पछाडी दुई जना सवार थिए । पाँचखुवा देउराली स्वास्थ्य चौकीको उक्त एम्बुलेन्समा सवार चारमध्ये दुई जना काठमाण्डौँ र दुई जना भारतबाट आएका मानिस थिए ।
एम्बुलेन्स चालकले आफुलाई बाटोमा रोकेर लगिदिन अनुरोध गरेपछि ल्याएको बताउँदै थिए । भारतबाट आएका दुई जना भिमसेन थापा गाउँपालिका १ र ६ का पुरुष थिए । प्रहरीले केरकार गर्दै गर्दा चालक देखि सवार यात्रुको बोली पटक पटक फरक थियो ।
अन्ततः भातरबाट आएकाहरुलाई गाउँपालिका जनप्रतिनिधि सँग सम्पर्क गराएर त्यही एम्बुलेन्समा पठाईयो । प्रहरीले एम्बुलेन्स नरोकेको भए भारतबाट आएका ति ब्यक्तिको बारे थाहा हुने थिएन ।
बुधवार दिउँसो एउटा एम्बुलेन्स बारपाकका लागि बिरामी ल्याएको भन्दै गोरखा प्रवेश ग¥यो । चालक सहित त्यहाँ आठ जना थिए । बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा एक जना बिरामी र अन्य सबै यात्रु थिए । प्रहरीलाई भने उनीहरुले आफ्नो परिवार भित्रकै सदस्य रहेको बताउँदै गन्तब्य तर्फ लागे ।
यी दुई एम्बुलेन्स मात्र होईन अहिले अधिकासं गोरखा भित्रने एम्बुलेन्सले बिरामीको बाहनामा यात्रु बोक्ने गरेका छन् । बिहिवार १० देखि १२ वटा एम्बुलेन्स गोरखा भित्रिएको मझुवामा रहेको चेकपोष्टमा रेकर्ड छ । त्यहाँ खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको होला भनेर खासै चासो गर्दैनन् ।
तर एम्बुलेन्सले यात्रु बोक्ने गरेको भेटेपछि कडाई गर्न थालिएको गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी शेखर खनालले बताए । बिरामी लिन गएको, पु¥याएर फर्किएको बाहनामा एम्बुलेन्सले गाउँगाउँमा भारतबाट आएका, काठमाण्डौँ, चितवन लगायत ठाउँमा यात्रु ओसारपोसार गरिरहेका छन् । यात्रुलाई बिरामी बनाएर महँगो पैसा लिएर हिजोआज एम्बुलेन्स अत्याधिक गुड्ने गरेको छ ।
अन्य समयमा बिरामी र बढीमा दुई जना आफन्त बोकेर हिड्ने एम्बुलेन्स अहिले खचाखच यात्रुलाई बिरामी कुरुवा, आफन्त बनाएर कुद्ने गरेको छ ।
कतिपय एम्बुलेन्सले खाली प्याक राख्ने र औषधी खरिद गरेर आएको बाहना बनाउँदै यात्रु ओसार्ने गरेका छन् । गोरखा अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने बेला एम्बुलेन्स नपाएर निजी सवारीमा रिफर गर्नुपरेका धेरै घटना छन् । गोरखामा अहिले ५० वटा एम्बुलेन्स छन् तर खाजेको बेला नपाउने गुनासो सर्वसाधारणको उस्तै छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रवार एक सुचना जारी गर्दै एम्बुलेन्सले बिरामी बाहेकका यात्रु ओसारेको गुनासो बढेकाले त्यस्ता एम्बुलेन्स संचालक, चालक र सवार हुने ब्यक्तिलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ । प्रशासकिय अधिकृत हर्कबहादुर रोकाले सुचना जारी गर्दै संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार कैद तथा जरिवाना हुने बताएका छन् ।